အချစ်ကမျက်မမြင်ရာသီ ၂ ရက်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလအသစ်တစ်ခုရှိသလား။ - Netflix မူရင်း
အချစ်ကမျက်မမြင်ရာသီ ၂ ရက်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလအသစ်တစ်ခုရှိသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Netflix တွင်မျက်မမြင်ရာသီ 1 ဖြစ်သည့် Netflix ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်
The Queen of the South season5ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်သတ္တပတ်များ - ရာသီသစ်တစ်ခုရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ အပျိုစင်မြစ်ရာသီ (၃) ရက်လွှတ်ပေးသည့်နေ့ - အသစ်သောရာသီရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
လူအများစုသည်ယခုအချိန်တွင် Netflix တွင်ရရှိနိုင်သည့်အဖြစ်မှန်ချိန်းတွေ့မှုစီးရီးများမည်မျှရာသီရှိသည်ကိုသိလိုကြသည်။ ယခုအချိန်အထိလက်ရှိရာသီတစ်ခုသာရှိသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ရာသီ2ဖြစ်မယ့်ရာသီဖြစ်မယ့်ရှိပါသလား?
ပထမ ဦး ဆုံးအပြေးပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်အတော်များများကအဲဒီမှာရှိမလားဆိုတာမသိရပါဘူး ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ရာသီ ၂။ ကံကောင်းတာက Netflix က ၀ င်ခွင့်များပိုမို ၀ ယ်လိုအားကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးအသင်း ၀ င်များကိုစိတ်မပျက်စေရ
မတ်လ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ပြပွဲသည် သက်တမ်းတိုး နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဤသေးငယ်သောမျက်နှာပြင်၏လူမှုရေးစမ်းသပ်မှုကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားရန်မျှော်လင့်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောသတင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထိုသို့သာမဟုတ်ခဲ့ပေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ streaming network ကတတိယမြောက် outing လည်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုလည်းပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်ရပ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်စဉ်များကိုမျက်စိကန်းရာသီ2ပါသလဲ
၏ပထမရာသီ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ ခုပါ ၀ င်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံလုပ်ရန်မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရာသီ 1 အပြီးသတ်ပြီးနောက် Netflix နှင့် YouTube တို့တွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအထူးအစီအစဉ်ရှိခဲ့သည်။ တရားဝင်အားဖြင့်ဘာမျှမထည့်သွင်းထားသော်လည်း၎င်းကိုယူဆနိုင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ရာသီ2အတူတူပြုလိမ့်မည်။
အချစ်ကမျက်မမြင်ရာသီ2ကိုရိုက်ကူးတာဘယ်တော့လဲ။
အဘို့အစီစဉ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ရာသီ2ဖြစ်ပါတယ် လုပ်နေတယ် , နှင့် streaming များအင်အားကြီးသူတွေကိုထိခိုက်အဖြစ်မှန်စီးရီး၏အခြားကြားမှာရောက်စေဖို့မဆိုအချိန်ဖြုန်းမပေးပါနဲ့တူပုံရသည်။
Casting ကိုမတ်လ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်စတင်ခဲ့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ချီလီ၊ အီလီနွိုက်စ်၌ရာသီ ၂ နှင့် Netflix စီးရီး၏အကူအညီဖြင့်သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေနေသူများ၏စာရင်းကိုမည်သူကဖြန့်ချိသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘို့အ Casting ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ရာသီ3က၎င်း၏စိတ်ကူးနောက်ဆက်တွဲ၏စုဆောင်းမှုကိုလိုက်နာမှဆိုပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုမပြီးဆုံးသေးပါ။ အချစ်၏ရာသီ ၂ မှာမျက်မမြင်ဖြစ်နေပြီ၊ https://t.co/HmAZq4w3MQ pic.twitter.com/Gs25a1f22Z
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်စိကန်းသည် (@LoveisBlindShow) မတ်လ 24, 2020
ယခုအချိန်တွင်ရိုက်ကူးမည့်အခြေအနေအတိအကျကိုမသိရသေးပါ။ အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဇာတ်လမ်းတွဲများ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများအားလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်ကင်မရာများလှိမ့်မည်ကိုမည်သည့်အချိန်၌ပင်မှန်းဆ။ မရပါ။ Netflix ၏မူလစီးရီးထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရှေ့သို့ရွေ့လျားနေသောအရာများမည်သို့ကစားသည်ကိုကြည့်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ရာသီ ၂ ဖြစ်သည်
ရာသီ2များအတွက်တရားဝင်လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်ကြေညာချက်ရှိခဲ့သည်မဟုတ်ခဲ့ပေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ နှင့်ရှေ့မျက်နှာမှမည်သည့်သတင်းမပေါ်ပေါက်မီအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ သို့သော် Netflix ၏မူလအဖြစ်မှန်စီးရီးများမည်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လာမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာတတ်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ရာသီ ၂ သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ရနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်၊ ဤသည်မှာယခုအချိန်တွင်ထင်မြင်ချက်မျှသာဖြစ်သော်လည်းထိုအချိန်ကာလသည်မမှန်ကန်ပါကအံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ အဖြစ်မှန်ပြ၏ဒုတိယရာသီ စက်ဝိုင်း နှင့် ကိုင်တွယ်ရန်အရမ်းပူ ဒီနှစ် Netflix ကိုနှိပ်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ လာမယ့်လများအတွင်းပြန်သွားရန်။
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသိစေရန်ပါလိမ့်မယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျက်မမြင်ဖြစ်၏ ကျနော်တို့ထွက်ရှာတွေ့သည့်အခါရာသီ2လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ! Stay ရာသီအကြောင်းကိုသတင်းများအတွက်ညှိနေပါ။
နောက်တစ်ခု:Netflix သည်ရုပ်ရှင်အသစ် ၂၀ နှင့်ယခုအပတ်တွင်ပြသနေသည်
Bates မိုတယ်ရာသီ5သောအခါအထွက်ကြွလာ
Ricardo hurtado ဘယ်လိုအသက်
အရှုပ်တော်ပုံ ၆။ ဘယ်တော့စမလဲ
ဘယ်မှာတော်တော်နည်းနည်းမုသာကိုသုံးသောရာသီ7လေထုလိမ့်မည်
wentworth ရာသီ6ထွက်လာမယ့်အခါ